USA: Xiisad markale ka dhalatay wiil madow oo ay Booliiska dileen
Home Somali News USA: Xiisad markale ka dhalatay wiil madow oo ay Booliiska dileen
Mudaharaadyo rabshado wata ay ka dhacay magaalada St. Louis ee gobalka Mossouri ee dalka Maraykanka kadib markii ciidamada booliiska ay dileen wiil da’a yar oo madow ah xili ay ku jireen hawlgal la dagaalanka daroogada ah.
Booliiska ayaa sheegay in wiilkan xalay la dilay oo ahaa 18 sano jir uu sitay bistoolad xili ciidamada ay doonayeen inay galaan guri lagu sheegay in lagu iibiyo daroogada, waxayna askarta rasaasta fureen markii wiilkaasi uu bistoolad lasoo baxay, sida uu sheegay taliska booliiska.
Dhacdadan ayaa keentay in qaar kamid ah dadka madow ay banaanbax ka dhigiin magaalada St. Louis, waxayna dhagaxaan iyo dhalooyin ku tuureen ciidamada. Dadka banaanbaxayey ayaa sidoo kale dab qabad siiyey guryo, gaadiid iyo waliba calanka Maraykanka.
Gobalka Mossouri ayaa lagu xasuustaa rabshadihii ka dhacay magaalada Ferguson oo ay sidan oo kale rabshado ka dhaceen kadib dilkii loo geystay wiil madow oo lagu magacaabo Michael Brown oo uu dilay askari cadaan ah.
Dadka madow ee Maraykanka ah ayaa muddooyinkii danbe ka banaanbaxayey falalka ay ku kacaan ciidamada Booliiska Maraykanka oo ay ku eedeenayaan inay awood xad dhaaf ah u adeegsadaan dadka madow xataa hadii aysan wax hub ah sidan, waxaana jira dilal badan oo ay ciidamada u geysteen dhalinyaro madow oo badan kuwaasi oo qaarkood aan wax danbi ah geysan ama kaliya loo dilay tuhun laga qabay.
Somaliland: Meeting to Approve TIS Plus Proposed Development Projects in Erigavo and Las Anod held
Somaliland: Siyaasi Katirsan Garabka Toosinta Iyo Caddaaladda Oo Axmed M. Seed Ku Eedeeyey Inuu Siyaasadda Ugu Jiro Sidii Uu Uga Shaqaysan Lahaa
Somaliland: Xukuumadda Oo Ka Digtay Shir Laga Abaabulayo Buuhoodle Oo Ay Ku Tilmaantay Fidmo Dibeda Laga Soo Waariday
Somalia: Al Shabaab vows to continue attacks against UN agencies
Somaliland: Daawo Dad Diinto Ku Yartahay Oo Sida Xoolaha Loo Dabiibayo “Caasimada Hargeysa Oo Ku Jabtay Sheekhi Reer Boosaso”
Somaliland: Bixitaanka Saldhiga Milatari Ee Somaliland Iyo Olalaha Guulwadayaasha Qaranka + Lacagta Xaqul Qalnka